Iiprokaryothi zizinto ezilunxwemeni eziluncedo olulodwa kunye neendlela ezininzi zokuqala emhlabeni. Njengoko ihlelwe kwiNkqubo yeThathu yeZakhiwo , ii-prokaryotes ziquka iibhaktheriya kunye ne- archaeans . Ezinye iiprokarythi, ezinjenge-cyanobacteria, zizinto ze- photosynthetic kwaye zikwazi ukwenza i- photosynthesis .
Iiprokarythi ezininzi zinemipopoples kwaye zikwazi ukuhlala zikhule kakuhle kwiindidi ezahlukahlukeneyo ezibandakanya ukujikeleza kwamanzi, iimithombo ezitshisayo, iimvula, iindawo ezinxweme kunye neziqu zabantu kunye nezilwanyana ( Helicobacter pylori ). Iibhaktheriya zeproyrotic zifunyanwa phantse naphi kwaye ziyinxalenye ye- microbiota yomntu . Bahlala esikhwameni sakho, emzimbeni wakho, nakwizinto zansuku zonke kwindawo yakho.
Ulwakhiwo lweeNkqubo zePlayotic
I-Cell Anatomy yeSalathisi kunye nesakhiwo sangaphakathi. Jack0m / Getty Izithombe
Iiseli zeProkaryotic azikho ezinzima njengeeseli ze- eukaryotic . Abanalo nucleus yeqiniso njengoko i- DNA ingabikho kwi-membrane okanye ihlukaniswe nayo yonke enye iseli, kodwa ihlanganiswe kwindawo ethile ye- cytoplasm ebizwa ngokuba yi-nucleoid. Izinto zeParyotic zineenkalo ezahlukeneyo zeseli. Ubume bhaktheriya obuqhelekileyo bunobuncwane, buyi-rod, kunye nokuvutha.
Ukusebenzisa ibhaktheriya njengeprokaryote yethu yesampula, izakhiwo ezilandelayo kunye neengqununu zingatholakala kwiiseli zebhakterina :
I-Capsule - Efunyenwe kwezinye iiseli zebhakteria, esi simbozo sangaphandle sithe sakhusela iseli xa sinezinye izinto eziphilayo, sincedisa ukugcina umswakama, kwaye sinceda iseli ihambelane neendawo kunye nezondlo.
Uluhlu lweeSeli - Udonga lwesellu lukhuselo lwangaphandle olukhusela iseli yebhakteria kwaye lunika.
I-Cytoplasm - I- Cytoplasm yintsimbi efana ne-gel equlunqwe ngokubanzi ngamanzi anokuqulethe i-enzyme, i-salts, izakhi zeeseli kunye nama-molecule ehlukahlukeneyo.
Ummbrane weSelfowuni okanye i-Plasma Membrane - I- membrane yeseli iyakujikeleza i-cytoplasm yeseli kwaye ilawula ukuhamba kwezinto ngaphakathi nangaphandle kweseli.
I-Pili (i-Pilus yodwa) - Izakhiwo ezinwele ezinwele kwi-cell esithintela kwezinye iiseli zebhaktheriya. I-second shorter ebizwa ngokuthi i-fimbriae inceda iibhaktheriya zifake kwiindawo.
I-Flagella - I- Flagella yinde , i-whip-like protrusion enokusiza ekukhutsheni kwamaselula.
I-Ribosomes - I-Ribosomes zizakhiwo zeseli ezijongene nokuveliswa kweprotheni .
Iiplasmids - Iiplasmids zithwala i- gene , izakhiwo ze- DNA zisesetyhula ezingabandakanyeki ekuveliseni.
Ummandla weNucleiod - Indawo ye-cytoplasm equle i-molecule ye-DNA eyodwa.
Amaseli aseProkaryotic awananto i-organelles etholakala kwiiseli ze-eukaryoitic ezifana ne- mitochondria , i- endoplasmic reticuli kunye ne- Golgi complexes . Ngokutsho kwe- Endosymbiotic Theory , i-organels eukaryotic kucatshangelwa ukuba iguquke kwiiseli zeprokaryotic ezihlala kwi-endosymbiotic ubudlelwano nabanye.
Njengeeseli zityalo , ibhaktheriya inelolu lucingo. Ezinye iibhaktheriya nazo zine-polysaccharide i-capsule ecaleni kwendonga yeselingi. Kulo luhlu apho iibhaktheriya zivelisa i- biofilm , isicatshulwa esincinci esinceda ama-colonies akhonkco kwiindawo kunye kunye kunye nokukhuselwa kwi-antibiotic, iikhemikhali kunye nezinye izinto ezinobungozi.
Ngokufanayo nezityalo kunye ne-algae, ezinye iiprokaryothi nazo zinee-pigy photosynthetic. Ezi zikhanyisi zokukhanya zivumela iibhitteria ze-photosynthetic ukuba zithole ukutya okuvela ekukhanyeni.
I-E. coli ibterteria ehamba ngefission binary. Udonga lweeseli luhlula ngokubangela ukubunjwa kweeseli ezimbini. UJanice Carr / CDC
Uninzi lwama-prokarythi luvelisa ngokwe- asexually ngokusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuthi i- binary fission . Ngexesha lokubhalwa kwebhanari, i-molecule enye ye- DNA ichaza kwaye iseli yasekuqaleni ihlukaniswe ngamaseli amabini afanayo.
Iinyathelo zeBhinary Fission
I-fission binary fission iqala ngokuphindaphinda kwe-DNA ye-molecule enye ye-DNA. Zombini iikopi ze-DNA zifakwe kwi- membrane yeseli .
Emva koko, i-membrane yeseli iqala ukukhula phakathi kwee-molecule ezimbini zeDNA. Emva kokuba ibhaktiriya iphindaphinda iphindwe kabini ubukhulu bayo bokuqala, i-membrane yeseli iqala ukungena ngaphakathi.
Udonga lweselula luya kubumba phakathi kwee-molecule ze-DNA ezahlula iseli yangaphambili zibe ezimbini ezimbini.
Nangona i- E.coli kunye nezinye iibhaktheriya eziqhelekileyo zivelisa ngo-fission binary, le ndlela yokuvelisa ayivelisi ukuhlukahluka kofuzo ngaphakathi kwendalo.
I-color-electron micrograph (i-TEM) ye-electro micrograph (i-TEM) ye-bacteria yase-Escherichia (ngasekunene) idibanisa nezinye ii-bacterium ze-E.coli. Ii-tubes ezidibanisa ibhaktheriya ziyi-pili, ezisetyenziselwa ukudlulisela izinto eziphathekayo phakathi kwebhaktheriya. DR L. CARO / I-Photo Photo Library / Getty Izithombe
Ukuhlukahluka kwe- Genetic ngaphakathi kwezilwanyana zeprokaryotic kufezekiswa ngokunciphisa . Ukubuyiswa kwakhona, iifayile ezivela kwiprokaryote enye zifakwe kwi-genome enye iprokaryote. Ukugqithiselwa kufezekiswa ngokuzaliswa kwebhakteria ngeenkqubo zokudibanisa, ukuguqulwa okanye ukuhanjiswa.
Xa kudibaniswa, iibhaktheriya zixhamlana ngomnye ngeprotheni yebhanki ebizwa ngokuba yi-pilus. AmaGenesis adluliselwa phakathi kweebhaktheriya nge pilus.
Ngenguqu , iibhaktheriya zithatha i-DNA ezivela kuyo. I-DNA ithathwa kwi-cell membrane kunye ne-DNA ye-bacterial cell.
Ukutshintshiselwa kubandakanya ukutshintshwa kwe-DNA ye-bhaktiriya ngokusuleleka kwintsholongwane. I-Bacteriophages , iintsholongwane ezithintela ibhaktheriya , ukudlulisa i-DNA ye-bacteria kwi-bacteria ekhulelwe ngaphambili ukuya kuyo nayiphi na ibhaktheriya eyongezelelweyo ayifumayo.
Indima yeChinetochore Ngexesha leCandelo leSeli
I-Carbohydrate: I-Sugar kunye neyeMveliso
I-Peroxisomes: i-Eukaryotic Organelles
Indima yeCytoplasm kwiSeli
Umsebenzi kunye noLwakhiwo lweeprotheni
I Symbolism yeStag
Iimvavanyo zesiLwimi zesiJamani - Icandelo III - iNqanaba B1 CEFR
IsiJapan esisisiseko: UkuLalela kwi-Restaurant
Imikhosi edlulileyo nekhoyo yangoku ye "Tonight Show"
Uphi uWilliam Shakespeare owazalwa?
Ukuguqulela 'Ngokuba' kwixesha leNgcaciso
ImiGubho emine yoNyaka yamaYuda omtsha
Ukubhiyozela iNyanga epheleleyo
Kutheni Ufanele Uhlabelele Njengoko Uthetha Nendlela Yokukwenza
Ii-CD ezisemqoka zeMveli yeSka
Ubhaptizo lukaYesu nguYohane
I-Viking Trading kunye ne-Exchange Networks-Economics yaseNorse
U-Michelangelo, uMvukeli woKuvuselela
Ukuphazamisa ibinzana (igrama kunye nesitayela)
Iimpahla eziphezulu ze-Anime Costume
Izandla zoMandla zaseNtaliyane
Indlela yokusebenzisa i-German Personal Pronouns